Known Islam Association Myanmar: ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ? အပိုင်း (၁)
ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ? အပိုင်း (၁)
(၁) ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး
အစ္စလာမ်ကို အတွင်းကျကျလေ့လာကြည့်ပါက ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းအကြားက ဆက်ဆံရေးကို အဓိကထား အလေးပေးကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်သက်ဝင်သူကို ဖန်ဆင်းရှင် အား သိရှိ သတိရနေစေရန် အားပေးပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကို သတိတရရှိနေခြင်းက ထာဝရ စိတ်နှလုံး အေးချမ်း ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ စစ်မှန်သော ကျေနပ်မှုဟာ ဖန်ဆင်းရှင်အား သတိတရရှိခြင်းနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်၏ အမိန့််ကို နာခံခြင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။
"မှတ်ထားကြကုန်၊ အလ္လာဟ်ကို သတိရတသခြင်းဖြင့်သာ စိတ်နှလုံးများသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ရရှိပေသည်။"(ကုရ်အာန် - ၁၃:၂၈)
ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ အစ္စလာမ်က ဆုံးမထားပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် မိမိ၏ ဆက်သွယ်မှုကို အလေးထား ဂရုပြု၍ ဖန်ဆင်းရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ၊ ယုံကြည် သက်ဝင် သူတွေဟာ စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထာဝရပျော်ရွှင်မှုကို မိမိ၏ ဆန္ဒများနောက်လိုက်ခြင်း၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်းတို့တွင် ရှာဖွေနေမည်ဆိုလျှင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်တွင်းက နေရာလွတ်ကို ဘယ်သောအခါမှ ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအပ်ချက် ဟာ အရှင်မြတ်ကို သတိရ တသခြင်းဖြင့်သာ ပြည့်ဝနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းတရားကတော့ မုစ္စလင်မ်တွေဟာ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်အား ခဝပ်ဆည်းကပ်ရာတွင် အခြားမည်သည့်ကြားခံထံသို့ (သို့မဟုတ်) ကြားခံမှတဆင့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းရန် မလိုအပ်ပါဘူး။
(၂) ဘဝအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်
အစ္စလာမ်က လူသားတွေကို မိမိတို့ဘဝသက်တမ်းမှာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှလာသော စမ်းသပ်မှုများ ဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းလင်းစွာ ရှုမြင်တတ်ဖို့ သင်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာ လူတစ်ယောက် လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စကို ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ဖန်ဆင်းရှင်ကို သတိရ၍ အမိန့်နာခံရန် နှင့်နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစား၍ နားလည်လာစေပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ လူသားတွေကို ဖန်ဆင်းရာမှာ ဉာဏ်ပညာနှင့် မိမိဆန္ဒကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်မှုတို့ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မည်သူက ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ဆန္ဒရှိစွာ လိုက်နာ သလဲ စမ်းသပ်ဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘဝ စမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း ၊ ထိုအဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လို တုန့်ပြန် မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုသာ အာရုံစိုက်ရန် ၊ ကောင်းချီးမဂ်လာများအပေါ် ဖန်ဆင်းရှင်အား ကျေးဇူးတင်ရန်၊ အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရချိန်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံ တတ်ရန် အစ္စလာမ်က လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတရား _ ဒါဟာ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်သော ဘဝအတွက် ဖော်မြူလာ ပါပဲ။ အစ္စလာမ်က ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေကို အရှင်မြတ်အား မေ့လျှော့စေမည် ဤလောက၏ အပျော်လွန်ကြူးမှုများတွင်နစ်မွန်းခြင်း၊ အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲ၍ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ကာ အရှင်မြတ်အား အပြစ် တင်စောဒကတက်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္တုလောကကို မမက်မောခြင်းဖြင့် မုစ္စလင်မ်တစ်ဦးဟာ အဖြစ်အပျက်ဆိုးများကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိ၍ မိမိအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လည်း ရက်ရောသော၊ ကောင်းကျိုးပြုသောသူ ဖြစ်လာဖို့ အစ္စလာမ် က အားပေးပါတယ်။ ဤသို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့် ဘဝအပေါ် ပို၍မျှတစွာ ရှုမြင်တတ်၍ အကောင်းမြင်စိတ်လည်း တိုးပွားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်မှန်ရှင်းလင်းသော အယူအဆ
အစ္စလာမ်ဟာ အခြားသောဘာသာတရားများကဲ့သို့ စတင်တည်ထောင်သူ (သို့မဟုတ်) စတင်ဖြစ်ပေါ် လာသော အသိုင်းအဝိုင်းကို အစွဲပြု၍ အစ္စလာမ်ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့အမည်ဟာ စကြဝဠာ ၏ ဖန်ဆင်းရှင်ကို နာခံကျိုးနွံမှုကို ရည်ညွှန်းတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်၏ အလှတရားများမှ အဓိက တစ်ခုကတော့ ဖန်ဆင်းရှင်သည် မည်သူနှင့်မျှနှိုင်းယှဉ်ရန်မရှိသော ပြီးပြည့်စုံသော၊ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် တော်မူသော၊ ပြိုင်စံကင်းတော်မူသော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကို ဖန်ဆင်းရှင်၏ ဂုဏ်တော်များနှင့်ပတ်သတ်သော စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ့် အဆုံးအမများတွင်လဲ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ တစ်ပါးတည်း ပြိုင်စံကင်းစွာ တည်ရှိတော်မူပါတယ်။
• အရှင်မြတ်ထံတွင် တွဲဖက် ၊ ဂုဏ်ရည်တူသူ၊ ယှဉ်ပြိုင်ဖက်ဟူ၍ မရှိပါ။
• ဖန်ဆင်းရှင်ထံတွင် ဖခင်၊ မိခင်၊ သားသမီး၊ ဇနီးလည်း မရှိပါ။
• ဖန်ဆင်းရှင် တစ်ပါးတည်းကသာလျှင် ခဝပ်ဆည်းကပ်မှု ဟူသမျှကို ခံထိုက်တော်မူသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ အလုံးစုံကို စွမ်းနိုင်တော်မူသော အရှင် ဖြစ်တော်မူတယ်။
• ဖန်ဆင်းရှင်သည် အရာအားလုံးကအပေါ် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရှိတော်မူသည်။
• အရှင်မြတ်ကို နာခံခြင်းကြောင့် အရှင်မြတ်၏ တန်ခိုးတော်ဟာ တိုးပွားလာခြင်းမရှိသကဲ့သို့ အရှင်မြတ်ကို မနာခံ၍လည်း တန်ခိုးတော်မှာ လျော့သွားခြင်းမရှိပါ။
• ဖန်ဆင်းရှင်၏အထက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သူ ဟူ၍ လည်းကောင်း အလျှင်းမရှိပါ။
• ဖန်ဆင်းရှင်၏ ဂုဏ်ရည်တော်တွေဟာ ဖန်ဆင်းခံတွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ မတူပါဘူး။
• မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်၊ မည်သည့်အရာ တွင်မှ ဖန်ဆင်းရှင် ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟူ၍ မပါဝင်ပါ။
ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ ပြည့်စုံ တော်မူသော အရှင် ဖြစ်တော်မူပါတယ်။
• ဖန်ဆင်းရှင်ဟာ ပြည်စုံသောဂုဏ်တော်ကို အမြဲ ထိန်းသိမ်းတော်မူပြီး အခြားဘာသာတရား ယ့ုကြည်မှုများက ဆိုသည့် လူဖြစ်လာခြင်း ကဲ့သို့ သောကိစ္စရပ်များကို မပြုလုပ်ပါ။ ဖန်ဆင်းရှင် ဂုဏ်ရည်နှင့် မအပ်စပ်သည်များကို မပြုလုပ်ပါ။ ဘုရားသခင်ဟာ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး လူသားတို့ကဲ့သို့ပြုမူနေထိုင်ပါက ဘုရားသခင်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
(၄) အထောက်အထားနှင့် ယုံကြည်မှု နှစ်ခုလုံးကို အလေးပေးခြင်း
“ ဧကန်စင်စစ် ငါအရှင်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင် ထုတ်ဖော်တင်ပြသော အာယသ်တော်များကို ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်သည် မိမိအလိုရှိသူအား ဖြောင့်မတ်သောလမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပိုဆောင်တော်မူပေသည်။” (ကုရ်အာန် ၂၄:၄၆)
အစ္စလာမ်သာသနာတွင် ယုံကြည်မှုဟာ ရှင်းလင်းတဲ့ သက်သေပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ လူသားတွေကို ဖန်ဆင်းရှင် ချီးမြင့်ထားတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ကို အသုံးချ၍ ဘဝနှင့် စကြဝဠာ အကြောင်းဆင်ခြင်တွေးတော တတ်စေပါတယ်။ ဒီဘဝဟာ စမ်းသပ်မှု တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားကို နားလည်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန် အမြင် ကျယ်၍ စိတ်ရင်းမှန်သောသူတို့အဖို့ လုံလောက်သော နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ပေးထားပါတယ်။ အခြားကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများနှင့်မတူပဲ အစ္စလာမ်၏ကျမ်းစာကုရ်အာန်ဟာ ဖန်ဆင်းရှင် ထံမှဖြစ်ကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာများ၊အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ၊သက်သေ အထောက်အထားများစွာရှိပါတယ်။
 ၂၃နှစ်ကာလ အတွင်း အနည်းငယ်စီ ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း ဆန့်ကျင်ဖက်တစ်စုံတစ်ရာ၊ သို့မဟုတ် အမှားတစ်စုံတစ်ရာကင်းရှင်းခြင်း။
- အခြားသော စာပေများကဲ့သို့ ပျက်စီးသွားခြင်း၊ ပျောက်ပျက်သွားခြင်း၊ ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပဲ နဂိုမူလ အရဗီဘာသာစကားဖြင့် ကျရောက်ခဲ့သည့် အချိန်ကအတိုင်း စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်း ကိုယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။
- အမှန်တရားကို စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ရှာဖွေနေသူတို့အပေါ် လေးနက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် စစ်မှန်၍ ရိုးရှင်းသော ကမ္ဘာ့လူသားထု
- တစ်ရပ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းစကားပါရှိခြင်း။
- စာပေမတတ်သူ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ် (pbuh) ထံသို့ ချပေးခဲ့သည့်တိုင် ပြိုင်စံကင်းသော အတုခိုးရန်မဖြစ်နိုင်သော ဘာသာစကား၊ရေးဟန်တို့ကြောင့် အရဗီ ဘာသာစကား၏ ကြွယ်ဝမှု၊ လှပမှု၏ အထွပ်အထိပ်ဖြစ်ကြောင်း တစ်လောကလုံး ကလက်ခံထားခြင်း။
- နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ကျော်က ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း မကြာသေးခင်ကမှ လူတို့တွေ့ရှိထားသော အံ့ဩဖွယ် သိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါရှိခြင်း။
- ကုရ်အာန်၏ ထူးခြားပြောင်မြောက်၍ အံ့ဖွယ်ဖြစ်သော အကြောင်းအချက်များကြောင် ကုရ်အာန်ဟာ ဖန်ဆင်းရှင်မှလွဲ၍ အခြား မည်သူ့ထံကမျှ မဟုတ်နိုင်ကြောင်းမှာ ဆီလျှော်ဆုံး ရှင်းလင်းချက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။